af-Soomaali - Somaliska - Örebro bibliotek
af-Soomaali - Somaliska
Isticmaal hoyga maktabada ee dhinaca internetka
Waxaad habeen iyo maalin booqan kartaa hoyga maktabada ee dhinaca internetka.Halkaan ayaad ka akhrisan kartaa talooyin iyo warar ku saabsan waxyaalaha ka dhacaaya maktabada weyn degmada Örebro. Waxaad maktabada weyn ka heli kartaa buugaag badan oo caruurtu akhrisato iyo kuwo dadka waaweyn oo ku qoran luuqado kala duwan. Hoyga maktabada waxaad ka dhex samaysan kartaa sanduuq adigoo isticmaalaya lambarka kaarkaaga amaahashada iyo lambar sir ah oo aad ku geli kartid( PIN-kod).Markaas ka dib ayaad arki kartaa buugaagta aad amaahatay ee guriga kuu yaal iyo taariikhda dib loo soo celinaayo. Waxaad kaloo dib u amaahan kartaa buugaagta aad haysato iyo weliba adigoo saf u geli kara buugaagta cid kale la maqantahay ee la sugaayo.
Maktabada caalamiga ah ee magaalada stockholm waxaa uu leeyahay hoy dhinaca internetka ah ee aad ka akhrisan kartid warar dhinaca maktabada ah iyo warbixin ku saabsan buugaagta ku qoran luuqadaha kala duwan.
Samayso kaarka amaahashada
Waa lacag la àan inaad samaysato kaarka amaahashada.Soo qaado teesarahaaga , ka dibna waan ku caawineynaa.
Kombiyuutaro iyo isha internetka ( wi-fi)
Maktabada waxaad mar walba ka heli kartaa kombiyuutaro aalada internetka oo aad mar walba isticmmaali kartid mar haddii aad haysatid kaarka amaahashada ee mid ka mid ah maktabadaha Örebro. Waxaa kaloo jira fursad inaad waraaqo ka daabacato maktabada adigoo bixinaaya waxuun yar oo khidmad lacageed ah.
Haddii waxyaalihii aad amaahatay aad lasoo daahdo,waxa aad bixineysaa lacag.Haddii ay ay buugaag ama waxyaalo kale kaa dhumaan waxaad iyana bixineysaa waxuun kharash ah.
Waxaa la samayn karaa in laguu soo diro warqad xasuusin ah oo ku saabsan inaad soo celiso waxyaalihii aad deynsatay, warqadaas waxaa laguu soo marin karaa dhinaca sanduuqa boostada internetka ama fariin dhinaca taleefoonka ah. Balse adiga ayaa masuul ka ah waxii aad amaahato, waana waajib inaad wakhti ku soo celisaa haddii aad hesho warqad xasuusin iyo haddii kaleba. Haddii aad ilowdo wakhtigii aad soo celin lahayd waxyaalihii aad amaahatay waxaad warqad usoo diri kartaa maktabada ama waad soo weci kartaa si wakhtiga saxda ah laguugu sheego..
Ka dalbasho buugaagta maktabado kale
Waxaad buugaag ka dalban kartaa maktabadaha kala duwan ee Örebro, waxaadna kasoo qaadan kartaa hadba kii aad doonto. Sidaas waxaa ay kuugu suurtogeli kartaa adigoo hoyga internetka ee maktabada ka samaysta sanquuq amaahasho ama adigoo wacaaya ama warqad usoo diraaya maktabada.Ka dib waxaad heli doontaa fariin ku saabsan in buugii aad dalbatay uu yimid. Waxaad kolkaas haysataa hal usbuuc inaad buugaas soo qaadatid.
Kusoo dhowaaw maktabada Örebro (Välkommen till Örebro bibliotek) 69 KB
Caruurta oo kaarka amaahashada looga sameeyo maktabada dadweynaha ee Örebro (Ansvarsförbindelse barn) 173 KB